Golaha Soosaarayaasha Weelka Golaha & Shirkado - Shirkada Shiinaha Weelka Weelka Warshadaha
2 Bakhaar Hoyga Weelka Guryaha Loogu Tala Galay ee Hoyga Xafiiska
1.Kulaynta Guriga Weelka Guriga prefab waa nooc cusub oo ah keyd-urursi iyo guri ku habboon bey'ada. Badanaa waa qaab dhismeed isku dhafan oo bir-alwaax ah, kaas oo si dabacsan loo isugu dari karo loona rakibi karo. Waxaad ku dooran kartaa goobta dhismaha iyo aagga dhismaha hadba baahidaada. Waxay ku habboon tahay joogitaanka buuraha, buuraha, dhul daaqsimeedka, iyo lamadegaanka. , Webi Webi Waa astaamaha rogrogmi kara ee la beddeli karo ee guriga horay loo diyaariyey oo ay si ballaaran u adeegsadeen dadka isticmaala fa ...
20ft 40ft maraakiibta raaxada ah guryaha raashinka ah Prefabricated house for sale
1.Kulsaarka Guriga Weelka Habee adeegyadaaga baahiyahaaga Noocyo kala duwan oo midabbo ah ayaa la heli karaa iyadoo ku xiran dookhaaga Sida ku xusan baahiyahaaga inaad bixiso musqusha, tas-hiilaadka qubeyska Bixi adeeg deg-deg ah iyadoo loo eegayo baahidaada. lagu dhejiyo meel kasta, iyo qaybaha gudaha waxaa lagu dhejin karaa dhidib kasta oo jiifa. Jaranjarooyinka ayaa banaanka loo dhigay. Nolol adeeg dheer: Dhammaan qaab-dhismeedka birta fudud waxaa lagu daaweeyaa ...
Guri Weel La Guuri Karo oo Prefabricated loogu talagalay villa, xafiiska, musqusha guud Weelka Guriga Weelka Prefab Guriga La Guri Karo
1.Qasriga Weelka Guryaha Magaalooyinka heerka koowaad iyo labaad ee Shiinaha, qoysas badan oo dakhligoodu hooseeyo waxay la kulmaan caqabado kala duwan dhibaatooyinka guryaha awgood. Guryaha kontaynarrada ayaa laga yaabaa inay yihiin xulasho wanaagsan oo wax looga qabanayo cadaadiska hadda jira ee sicirka guryaha iyo diidmada baahiyo badan oo bulsheed. In kasta oo aysan macquul ahayn in Shiinaha uu hirgeliyo siyaasadda "haanta konteenarrada" muddada gaaban, ugu yaraan waxay qaadan kartaa habka "guryaha konteenaarka" ee magaalooyinka qaarkood ama shaqsiyaadka ...